Jose Mourinho oo MACIIN bidaya Ronaldo!! – Gool FM
Jose Mourinho oo MACIIN bidaya Ronaldo!!
Byare March 25, 2018
(Europe) 25 Maarso 2018. Jose Mourinho ayaa bad baado ka raadinaya Cristiano Ronaldoo oo aysan waji fiican ku soo kala tagin berigii ay wada joogeen Real Madrid isla markaana ay marar badan saxaafadda iska weerarareen.
Macallinka Manchester United ayaa doonaya inuu iminka meel iska dhigo farqiga kala duwanaanshaha ee u dhexeeya labadooda isla markaana uu Old Trafford keeno Cristian Ronaldo sida uu warinayo warsidaha Diario Gol.
Dib u dhacyadii dhawaan ku dhacay gaar ahaan guul daradii lama filaanka ay Champions League kala kulmeen Sevilla. Mourinho ayaa diyaar u ah inuu soo qaato laacib kasta uu isleeyahay wuxuu kaa caawin karaa inaan xilka lagaa xayuubin xilli ciyaareedka soo socda.
Ronaldo ayaana baryihii dambe u badanayay inuu ka soo tagi karo Real Madrid maadaama uu dareemayo inuusan taageero sax ah ka helin Florentino Perez oo aan weli heshiis cusub ku abaal marin kaddib bandhigyadiisii cajiibka ahaa.
Inuu dhulka uga tagay mar uu isku dayay inuu raacdo, inuu jeclaan lahaa inuu noqdo Spanish iyo inuu dartiis u soo jeeday habeen dhan (Fabregas oo ka sheekeeyay Messi)
Maxamed Saalax oo Saaxiibadiisa dhow dhow u sheegay in.......